अशिमको प्रस्तुतिमा तीज आउनु पूर्व नै सार्बजनिक गरिएको यो दशैं गीतलाई युट्युब बाट हटाउने निकाय कहाँ छ ? - Entertainment Khabar
अशिमको प्रस्तुतिमा तीज आउनु पूर्व नै सार्बजनिक गरिएको यो दशैं गीतलाई युट्युब बाट हटाउने निकाय कहाँ छ ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ०९, २०७५ समय: २०:०५:०२
राजु बोहरा–काठमाडौँ । नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत संगीतको क्षेत्रमा पछिल्लो पटक तीज गीतहरु अत्याधिक मात्रामा बजारमा आइरहेका छन् । यी गीतमा पनि तीज आउनु केहि महिना अगाडी नै सार्बजनिक हुँदा कता-कता बिकृति आएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । तर पनि ब्यवासाहिक रुपमा धरासाही बनिरहेको हाम्रो संगीतको क्षेत्रमा भएको तीज गीतहरुको लगानीमा पनि केहि टेवा पुर्याउन पनि केहि समय अगाडी नै सार्बजनिक गर्न उचित होला । यो भन्दैमा आफ्नो कला संस्कृति र मौलिक परम्परालाई व्यवस्था गर्दै बिभिन्न गीत संगीतहरु बजारमा ल्याउनु उचित नहोला ।
हो यति बेला नेपाली नारीहरुको महान चाड तीज समेत आइनसकेको अवस्थामा एक दशैं गीत सार्बजनिक भएको छ । अशिम कुमार कटुवालको प्रस्तुतिमा “पल्टनेलाई के दशैँ तिहार” नाममा बजारमा आएको यस गीतले साच्चै एक बाट अर्कोलाई पनि यसरी अन्य असान्दर्भिक गीत सार्बजनिक गर्नको लागि प्रत्साहन मिलि रहेको त छैन ? हामि सम्पूर्ण सचेत नागरिक हरुले यसरी ४ महिना अगाडी नै दशैं आउनु पूर्व यो दशैँ गीत सार्बजनिक हुनुलाई के भन्ने ? पक्कै पनि हामीले नेपाली लोक तथा दोहोरी संगीतमा आएको बिकृति र विसंगति माथि खेलबाड गर्ने यस्ता कलाकारहरुलाई संरक्षण दियौं भने भोलिका दिनमा भिनिन्न गीतहरु बाट हाम्रो समाज नबोल्न सक्छ । लोक भनेको समाज हो । बिभिन्न लोक तथा दोहोरी गीत बाट समय साप्यक्ष सामाजिक यथार्थ बाहिर आउनु पर्दछ ।
अंग प्रदशन र अश्लिलता मात्र नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत संगीत भित्रको बिकृति होइन । यसरी लोक पनको नाममा श्रावन महिनामा नै दशैं गीत सार्बजनिक गरेर सस्तो लोकप्रियता बटुल्न खोज्ने र नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा बिकृति भित्र्याउने कलाकारलाई निरुत्साहित गर्ने निकाय कहाँ छ ? सिंगो सांगीतिक क्षेत्र हितको निमित्त र मौलिक संस्कृतिको जगेनार्थ भनेर सुचारु भएका संघ संथाका पदाधिकारी मात्र कुर्सि मोहमा तल्लिन बनेका हुन् त ? यदि साच्चै आफ्नै कला संस्कृति र मौलिकता को जगेनार्थ यी संघ संस्था छन् भने अशिमको प्रस्तुतिमा तीज आउनु पूर्व नै सार्बजनिक गरिएको यो दशैं गीतलाई युट्युब बाट हटाउन सक्नु पर्दछ । संचार माध्यमले पनि राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्दै सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याउन सक्नु पर्दछ अनि मात्र तपाईंको कलम र माइकले आशिर्बाद दिनेछ ।
तीज आउनु पूर्व नै सार्बजनिक गरिएको दशैँ गीत तल राखिएको छ ।